काठमाडौं । गत सोमबार बिहान । संखुवासभाको मादी- १ उम्लिङमा एउटा चिच्च्याहट आयो, 'गुहार ! गुहार !! लोकेले मार्‍यो, गुहार ! मलाई बचाऊ ।'
प्रहरीले शंका लागेका छिमेकीहरूसँग अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । पत्रकार तथा युट्युबरहरू पनि त्यहाँ पुगेका थिए । रोचक कुरो त के छ भने, जसले हत्या गरेको छ, उनै लोकबहादुर कार्की पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने गरेका थिए । उनी भन्ने गर्थे, 'बडाबा (तेजबहादुर) एकदमै समाजसेवी सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, परिवार नै सखाप हुने गरी कसले हत्या गर्‍यो ?'
तर, घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले 'सुनचाँदी, पैसा घरमै रहेछ भनेको छ नि ?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘रिसइबीले नै हो कि जस्तो छ । यो घटना गम्भीर छ ।’